स्वास्थ्य Archives - Onlines Time
हामीले पानी नियमित रूपमा पिउने गर्छौ, तर पानी पिउनुका फाइदाहरूबारे हामीमध्ये धेरै नै निकै अनभिज्ञ नै छौ। पानीले दिने फाइदाहरूबारे जानकारी लिनु शरिरलाई स्वस्थ राख्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। मानिसलाई स्वस्थ रहनका लागि दिनमा कम्तिमा ८-१० गिलास पानी खानै पर्छ।आयुर्वेदमा भनिएको छ की बिहान तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउनु निकै लाभदायक हुन्छ । तामाको भाँडोमा राखिएको पानी पिउनाले शरिरको कयौ रोगहरू बिना औषधी नै ठिक हुन्छ । साथै, पानीले शरिरको विषलाई समेत बाहिर निकाल्न सक्ने हुनाले पनि पानीको नियमित र प्रचुरमात्रामा प्रयोग आवश्यक हुन्छ।तामाको भाँडामा कम्तिमा ८ घण्टा राखिएको पानी निकै लाभदायक हुन्छ। जुन मानिसहरूलाई कफको समस्या बढि हुन्छ, उनीहरूले पानीमा तुलसीको केही पात राखेर पानी पिउनु राम्रो हुन्छ। तामाको भाँडामा राखेको पानी खानुको फाईदा केही मानिसलाई मात्र थाहा छ। तामाको भाँडामा राखेको पानी खानुका...
Jan12022 by puspaNo Comments
डिप्रेसनबाट बच्नका लागि नियमित सेवन गर्नुहोस् पुदीना, यस्ता छन् यसका अचुक फाइदा जानी राखौं डिप्रेसनबाट बच्नका लागि नियमित सेवन गर्नुहोस् पुदीना, यस्ताे छ यसका अचुक फाइदा ! पुदिना स्वास्थको लागी अचुक औषधी हो ।यसको नियमित सेबनले स्वास्थमा राम्रो फाइदा हुन्छ । यसले खाना पचाउन सहयो गर्ने देखी सिलएर तौल घटाउने, डिप्रेसन तथा थकान घटाउने र टाउको दुखाई हटाउने लगायतका काम गर्छ । यसो त पदिना स्वास्थका लागी मात्र नभइ स्वालमा पनि मिठो हुन्छ । हामी यसको चटनी बनाएर खान सकिन्छ। त्यसैगरी पुदिनाको चिया पनि खान सकिन्छ । स्मरणशक्ति कमजोर भएमा यसको सेवन गर्दा त्यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यदि श्वासको दु-र्गन्ध छ भने पनि यसको सेवनले हटाउन मद्दत गर्दछ । पुदीनालाई प्रयोग गरेर टुथपेष्ट, चुईङगम, क्यान्डी, इन्हेलरजस्ता औषधिमा प्रयोग गरिन्छ।स्तनपान गराउने महिलाको स्तन र निप्पलमा पीडा हुन सक्छ । अध्ययन...
Dec302021 by puspaNo Comments
हाडजोर्नी दुखाइको लागि अचुक औषधि हो जाइफल ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका
सामान्यतया जो केहिलाई पनि चिसोको समयमा हाडजोर्नीको समस्या हुने गर्दछ । बढ्दो उमेरका मानिसहरुलाई क्याल्सियमको कमीका कारण जोर्नी दुख्नु सामान्य कुरा हो । तर मानिसहरु यस्ता दुखाई कम गर्नका लागि विभिन्न औषधिको प्रयोग तथा पेनकिलरको सहायता समेत लिने गर्छन । जोर्नी दुखाईको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि आफ्नै किचनमा प्रयोग हुने बस्तुको प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो हो जाइफल, जसको प्रयोगले जोर्नीको दुखाई सजिलै कम गराउछ ।जाइफलमा प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम र फस्फोरस तत्व पाइन्छ जुन हाडजोर्नीका लागि अति नै उपयोगी मानिन्छ । विशेषगरी यसले हरेक किसिमको जोर्नी दुखाई कम गर्न मदत पुर्याउछ । यसको प्रयोगका लागि सर्वप्रथम जाइफललाई राम्रोसंग पिसेर पाउडर बनाउने । हरेक दिन बिहान मनतातो पानीमा यस पाउडर मिसाई नियमित सेवन गरेको खण्डमा हाडजोर्नी दुखाईलाई कम गर्दछ । यसका अतिरिक्त तिलको तेलमा जाइफलको पाउडर राखी हल्का ...
भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ ।”खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ। ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ। यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ ढ्याउ आइरहने लगायत समस्या देखिन्छन् । ग्यास्ट्रिकको कारण पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ । जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियमलगायत कमी हुन जान्छ। यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ग्यास्ट्रिकको समस्या हुनेहरुले भुलेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोला ? एसिडिक खानेकुरा: कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि थप असर पुर्याउने चिकित्सक बताउँछन् । दूध र दूधजन...
थाहा पाइराख्नुहोस् कुन झारपात कुन रोगका लागि हुन्छ उपयोगी ? सबैले जान्नैपर्ने
जडिबुटी नेपालको सम्पत्ति हो । हाम्रा पितापुर्खाले यही जडिबुटी अर्थात आफ्नै बारी र भिरपाखाका झारपातबाट दीर्घजीवन प्राप्त गरेका थिए । तर, पछिल्लो पुस्ता यसबाट अनविज्ञ मात्र छैन । यसप्रति पुरै उपेक्षा गरेर अघि बढेको छ । तर, आफैमा सुगन्ध बोकेर सुगन्धको खोजीमा दौडिएको कस्तरीझै भएका हामी आफ्नै परम्परागत विधिमा फर्कनुको विकल्प छैन । किनभने हाम्रा बारीका कान्लाहरुमा उम्रने, बढ्ने र हुर्कने हरेक झारपातमा औषधिको महत्व छ । आवश्यक यति मात्र हो कि त्यसको पहिचान र प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । त्यस्तै तपाईकै बारीका कान्लामा रहेका केही झारपातको महत्व यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तुलसी : ज्वरो, रुघा, खोकी, क्यान्सर आदि रोगमा उपयोगी हुन्छ। निम : छाला, रगत र दाँतसम्बन्धी रोगमा फाइदाजनक मानिन्छ। बेसार : क्यान्सर, घाउचोट, रक्त विकार आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अमला : आँखा, पेट, शारीरिक कमजोरी एवं केशसम्बन्धी समस...
रगतमा चिनीको मात्रा बढ्यो ? हरियो खुर्सानी भिजाए बिहान त्यसको पानी पिउनुहोस्
हरियो खुर्सानी प्रत्येकको भान्सामा हुने गर्दछ। धेरै मान्छेहरू यसलाई काँचै खान पनि रुचाउँछन्। खुर्सानीमा भिटामिन बी ६, भिटामिन ए, आइरन, कपर र पोटासियम हुन्छ। हरियो खुर्सानीले खानामा स्वाद ल्याउँदैन मात्र, यसका अनेकौं फाइदाहरू पनि छन्।खुर्सानीमा कतिपय औषधीय गुण पनि हुन्छ। मुटुरोग,पेट दुख्ने समस्या जस्ता समस्याबाट यसले छुटकारा दिलाउने स्वास्थ्यसम्बन्धी गरिएको रिसर्चहरूले दाबी गर्ने गएका छन्। यहाँ हरियो खुर्सानीले गर्ने फाइदाहरूका बारेमा केही चर्चा गरिनेछ। खुर्सानीमा एन्टीअक्सिडेन्ट हुन्छ।यसले शरीरलाई बाह्य किटाणुहरूको आक्रमणबाट बचाउछ। यसले प्रोटेस्ट ग्रन्थीको समस्यालाई पनि टाढा भगाउछ। खुर्सानीमा गरिएका कतिपय अध्ययनहरूले यसमा भिटामिन सी र बिटा क्यारोटिन हुने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। यी तत्वहरूले आँखा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छन् भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउने काम गर्छ। खुर्सानी...
बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, एक हप्तामै देख्नुहुनेछ नतिजा यदी तपाई स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउन सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईको ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, उर्जामा सुधार, मोटोपन जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याबाट छुटकारा दिने गर्दछ। बिरे नुनमा ८० प्रतिशत खनिज र जीवनका लागि चाहिने सबै आवश्यक प्राकृतिक तत्व पाइने गर्दछ। पानी बनाउने विधि: एक गिलास हल्का तातो पानीमा एक तिहाई बिरे नुन मिलाउनुहोस्। त्यसपछि यसलाई प्लास्टिकको ढंक्कनले ढाकिदिनुहोस्। त्यसपछि गिलासको नुन घोल्नका लागि ३४ घण्टाका लागि छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि बिरेनुनको टुक्रा पानीमा घोलियो की खोलिएन हेर्नुहोस्। त्यसपछि पनि फेरि बिरे नुन थोरै मिलाएर त्यो पानी पिउनुहोस्। पाचन प्रणालीमा सुधार: बिरे नुनको पानीले मुखमा आएको लारवाला ग्रन्थिलाई सक्रिय रहन मद्दत गर्दछ। राम्रो पाचनका...
Dec232021 by puspaNo Comments
सर्पको विष समेत झार्ने तेजपत्ताका यी हुन् चमत्कारी फाइदा सबैले थाहापाउनुहोस्
तेजपत्ता पनि घरेलु औषधीले भरिपुर्ण गुण भएको पात हो । यसले माछा, मासुका परिकार स्वादिलो बनाउनको लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ । तर यसको औषधीय गुणको बारेमा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यसले स्वादको मात्र काम नगरेर अचुक औषधीको काम गर्छ । तेजपत्ताका फाइदा यस्ता छन् । सर्पको विष झार्छ : सर्पले टोक्ने वित्तिकैको आलो घाउलाई तत्काल निको पार्न तेजपत्ताले औषधिको काम गर्छ । विषालु किराले टोकेर बनेको घाउमा तेजपत्ताको रस प्रयोग गर्दा घाउ ठिक हुन्छ । सर्पले टोकेको ठाउँमा तेजपत्ताको रस लगाउँदा विष झर्छ । तेजपत्ताको तेलमा ‘एन्टी फंगल’ तथा ‘एन्टी ब्याक्टेरियल’ गुण हुन्छ, जसले छालाको इनफेक्सनबाट समेत बचाउँछ । जुम्रा मास्छ : टाउकोमा जुम्रा परेर दिक्क हुनेलाई तेजपत्ता वरदान बन्न सक्छ । पानीमा तेजपत्ता राखेर धेरै बेर उमाल्ने । यसरी उमालेको मनतातो पानीलाई कपालको जरामा लगाउने । तीन–चार घन्टा राखेपछि पानीले टाउको ...